८ वर्षको प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गर्ने इन्जिनियर जोडी - Engineers Post
आइबी चौधरी May 3, 2021
२०७० सालको कुरा हो, प्लस टु (साइन्स) पढ्न सुरज परियार र सम्झना बराल पोखरास्थित न्यु ग्यालेक्सी कलेजमा भर्ना भए । पहिलो नजरमै सुरजको मन सम्झनाले चोरिसकेकी थिइन् । ‘सम्झनासँग अरू साथीहरू जस्तै सामान्य हेल्लो/हाइ गरेर बोल्दा पनि मलाई अलि फरक महसुस हुन्थ्यो,’ सम्झनाले आफ्नो मन चोरेको क्षणबारे सुनाउँदै सुरजले भने ।
सुरज सम्झनालाई आफ्नो प्रेमको अभाष दिलाउन अनेक गतिविधि गर्थे । त्यतिबेला फेसबुक, इन्स्टाभन्दा जस्तै ‘मिग ३३’ नामक सामाजिक सञ्जाल लोकप्रिय थियो । सम्झनाले सोही सञ्जाल चलाउने गर्थिन् । सम्झनाले आफ्नो आइडी एकजना साथीलाई समेत दिएकी थिइन् । सुरजले त्यो आइडी पत्ता लगाएर सम्झनालाई एड गरे र आफूले सेयर गरेको कुरा देखाउन थाले ।
हुन त सुरजलाई पहिलो भेटमै मनको कुरा सम्झनालाई भनिदिउँ जस्तो लागेको थियो । उनले ६/७ महिना मनका कुरा मनमै च्यापेर राखे । ‘मैले उनलाई पहिलोपटक देख्नेबित्तिकै मनका कुरा भन्न खोजेको थिएँ तर भन्नै सकिनँ,’ उनले त्यो पल सम्झिँदै भने, ‘फेस टु फेस भन्न निकै अड लाग्यो । उपाय एउटै थियो त्यही मिगबाट प्रपोज गर्ने ।’
एकदिन बेलुकाको समय थियो । मिगमा लामो मेसेज टाइप गरेर उनले सम्झनालाई पठाए । सो मेसेजमा लेखिएको भाव सुनाउँदै सुरज भन्छन्, ‘मैले मेसेजमा आइ लाइक यु, तिम्रो नेचर, व्यवहार, सबै राम्रो लाग्छ । के तिमी मलाई मन पराउँछौं ? यस्तै यस्तै लेखेको थिएँ ।’ तर, प्रपोज मेसेज पठाउँदा उनी जति खुशी हुन्छन् त्यति नै दुखी मेसेज सेन्ड भएपछि हुन्छन्, ‘मैले प्रपोज गर्न हतार गरेँ कि ? उनले साथी मात्रै पो सोचेकी थिइन् कि ? अब बोल्छिन् कि बोल्दिनन् होला ?, मैले गलत गरेँ कि ?’ उनको मनमा अनेकन प्रश्न खेल्न थाले ।
सुरजले मेसेज पठाएको डेढ घण्टा उनका लागि निकै सास्तीको समय थियो भने त्यसको रिप्लाई आएपछिको समय संसारकै सबैभन्दा खुशीको क्षण थियो । किनभने डेढ घण्टापछि सम्झनाले रिप्लाई पठाइन् । वास्तवमा सम्झनाले सुरजको प्रपोज मेसेजको पर्खाइमा नै दिन बिताइरहेकी थिइन् । उनले भनिन्, ‘मलाई उहाँ पहिलो नजरमै मन परिसकेको थियो । म केवल उहाँको प्रेम प्रस्तवाको पर्खाइमा थिएँ ।’
प्रपोजपछिको पहिलो भेट भने निकै अनौठो र असहज भएको सुनाउँछन्, सुरज । ‘पहिले पहिले मजाले बोलिने, जिस्किने, नोट सेयरिङ हुने हुन्थ्यो । तर, प्रपोजपछि भेट हुँदा निकै लाज लाग्यो । अब अरूले थाहा पाइहाल्छन् भन्ने जस्ता कुरा मनमा खेल्न थाले,’ इन्जिनियर्स पोस्टसँग उनले भने, ‘केही समयपछि अब हामी एकअर्कालाई धोका दिँदैनौँ । यो सम्बन्धलाई अब विस्तारै ओपन गर्नुपर्छ भनेर विस्तारै प्रेम सम्बन्धलाई खुलाउँदै लैजाने सोच बनायौँ र घरपरिवारलाई पनि जानकारी गराउने सोच्यौं ।’
यसरी मन साटासाट गर्दागर्दै प्लस टु सकिएको थाहै भएन, दुवै जनालाई । जे होस् त्यतिबेलासम्म प्रेम सम्बन्ध बलियो भइसकेको थियो ।
सम्झनालाई प्लस टु पछि नर्सिङ पढ्ने इच्छा थियो । सोही अनुरूप उनी नर्सिङको तयारीमा जुटिन् । सुरज भने पोखरा विश्वविद्यालयमा इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङमा भर्ना भए । सुरजको पहिलो वर्ष र सम्झनाको नर्सिङ तयारी सकिएपछि सम्झनाको मन एकाएक परिवर्तन भयो । र, उनले पनि इन्जिनियरिङ पढ्ने इच्छा व्यक्त गरिन् । ‘नर्सिङ पढेपछि भविष्यमा हामी दुवैलाई एक–अर्कालाई समय मिलाउन गाह्रो हुन्छ, बरु म पनि इन्जिनियरिङ क्षेत्रमै आउँछु, नि !’ सुरजले सम्झनाको मन बदलिएको त्यो क्षणलाई सम्झिँदै भने, ‘एक वर्ष ढिला भए पनि मैले पनि उनको इच्छालाई कदर गर्दै हुन्छ भने अहिले हामी दुवै इन्जिनियरिङ पढेर खुशी छौं ।’
‘रिसाउँदा दुवैजना एकअर्कालाई फकाउँछौँ’
मायामा झगडा हुनु स्वाभाविक नै हो । अझ यसले मायालाई झनै गाढा पनि बनाउँछ भन्ने गरिन्छ । सुरज र सम्झनाको मायामा पनि कहिलेकाहीँ ठाकठुक पर्नु स्वाभाविक हो । यसले उनीहरूको मायालाई झनै मलजल गरेको सुनाउँछिन्, सम्झना । इन्जिनियर्स पोस्टसँग उनी भन्छिन्, ‘उहाँ खासै रिसाउनु हुन्न, रिसाएपछि ‘डेन्जर’ रिसाउनुहुन्छ, तर उहाँ रिसाए पनि म रोइदिन्छु । उहाँले नै फकाउनुहुन्छ । यसले उहाँ पनि खुशी र म पनि खुशी हुन्छु ।’ यही कुरालाई सुरजको मुखबाट सुन्ने हो भने उनी भन्छन्, ‘म अलि बढी रिसाउँछु । म रिसाएको बेला उनी कुल भएर फकाउँछिन् । अनि म फकिन्छु ।’
रिसाउँदा पनि दुवै एक–अर्कालाई निकै सम्मान गर्छन् । सुरज इन्जिनियरिङ पेसा सँगसँगै राजनीतिमा पनि सक्रिय छन् । त्यसैले उनका साथी सर्कल पनि अलि बढी छन् र उनी बढी व्यस्त हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा सम्झनाले सुरजलाई कुनै गाह्रो साह्रो पर्दा सघाउने र उनको मनलाई बुझ्ने हुनाले उनीहरुको प्रेम सम्बन्ध सधै अटुट रहिरह्यो ।
‘लुकीछिपी माया गर्नुको छुट्टै आनन्द हुन्छ’
सुरज र सम्झनाको प्रेम सम्बन्ध सुरु भएको ४ वर्षपछि मात्रै सुरजका परिवारले थाहा पाएका हुन् भने प्रेम सम्बन्धको ७ वर्षपछि मात्रै सम्झनाका परिवारले थाहा पाए । यसरी, लुकीछिपी प्रेम गर्नुको आनन्द नै बेग्लै रहेको सुरज बताउँछन् । ‘लुकीछिपी माया गर्नुको आनन्द बेग्लै हुन्छ । त्यतिबेला सारा संसार एकातिर हामी एकातिर भन्ने खालको भाइब्स आइरहेको हुन्छ । अर्थात् ‘यु एन्ड मी’ टाइपको फिलिङ्स आउँदो रहेछ,’ उनी भन्छन्, ‘जति बेला पनि बोल्न, भेट्न पाए हुन्थ्यो लाग्ने । मलाई त्यो समय ‘गोल्डेन टाइम’ जस्तै लाग्छ ।’
अब भने उनीहरुको प्रेमले सामाजिक मान्यता पाइसकेको छ । अर्थात, प्रेम सम्बन्ध गाँसिएको ८ वर्षपछि उनीहरु विवाह बन्धनमा बाँधिएसँगै व्यवहारिक बन्धनमा पनि बाँधिएका छन्, यही बैशाखमा । उनीहरु दुई सँगै उनीहरुको परिवारको पनि मिलन भएको छ । सुरज भन्छन्, ‘विवाहपछि हाम्रो प्रेम अझ गाढा भएको छ । हामी एक–अर्कामा विश्वास कायम गर्दै सधैभर एक–अर्काको सहयात्री बनेर जीवन बिताउनेछौँ ।’
#इन्जिनियर #प्रेम #विवाह